Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles ngoku ivela kuLuhlu oluBomvu lwase-UK
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Seychelles iluhlu oluBomvu lwase-UK
I-Seychelles iphume kuluhlu olubomvu lwase-UK luphawula inyathelo elilandelayo ekubuyiseleni ukhenketho kwindawo ekuyiwa kuyo.
I-Ofisi yamazwe angaphandle, i-Commonwealth kunye neOfisi yoPhuculo iphakamise iingcebiso zayo ngokuchasene nabo bonke kodwa uhambo olubalulekileyo oluya kwiindawo ezingama-47 kubandakanya iSeychelles.
Abahambi baya kuba nakho ukufumana i-inshurensi yendawo esiya kuyo, kwaye abagonyiwe akusafuneki ukuba bathathe iimvavanyo ze-PCR okanye babeke bodwa.
Oku kuyakubonelela ngendawo esiya kuyo kunye neenqwelo moya zayo kunye namaqabane ayo kushishino lokuhamba.
Ukusukela nge-4 kusasa nge-GMT, ngoMvulo, nge-11 ka-Okthobha ka-2021, abahambi abavela e-UK, indawo yentengiso yesithathu enkulu yezokhenketho yaseSeychelles, banokuphinda batyelele indawo ekuyiwa kuyo kwisiqithi soLwandlekazi lwaseIndiya nabahambi abakwaziyo ukufumana i-inshurensi yendawo ekuyiwa kuyo kunye nogonyo alusafuneki. ukuthatha iimvavanyo ze-PCR okanye ukubekwa bucala kwihotele evunyiweyo ekubuyeni kwabo ekhaya.
I-Ofisi yeZangaphandle, iCommonwealth kunye neOfisi yoPhuculo (i-FCDO) iphakamise iingcebiso zayo ngokuchasene nabo bonke kodwa uhambo olubalulekileyo oluya kwiindawo ezingama-47 kubandakanya iSeychelles njengenxalenye yenkqubo eyenziwe lula ukuhamba kwamanye amazwe obone ukutshintshwa kwenkqubo yokukhanya kwetrafikhi enoluhlu olunye olubomvu, kunye nokunciphisa iimfuno zovavanyo kubahambi abagonyiweyo abafanelekileyo.
Umphathiswa waseSeychelles Wezangaphandle kunye noKhenketho uSylvestre Radegonde ulamkele eli nyathelo liza ngaphambi kwesiqingatha sekota kunye neeholide zasebusika. “Ukushenxisa uluhlu olubomvu lwase-UK yenye into ebalulekileyo ekubuyiseleni ishishini lezokhenketho laseSeychelles, kwaye izakunika indawo yokufikela kunye neenqwelo moya zayo kunye nabalingane bayo kwezokhenketho. Kuluvuyo kuthi ukwamkela iindwendwe zethu zaseBritane, iintsapho kunye nabasandul 'ukutshata babuyele kwiziqithi zethu ezintle. I-UK ibisoloko iyimarike eyomeleleyo yaseSeychelles, ikwindawo yesithathu kwi-2019 ngeendwendwe ezingama-29,872, kwaye sinethemba lokuba ngezi ndaba zimnandi, siza kuqala ukuzibona ngamanani abalulekileyo. Ngeenkqubo zempilo nezokhuseleko ezamkelwe ngabezokhenketho kunye namaziko afumene isiqinisekiso esisemthethweni seCoVID-19, iindwendwe zethu ziqinisekisiwe ngeholide ekhuselekileyo neyonwabisayo. ”
Abatyeleli baseSeychelles kufuneka benjenjalo Gcwalisa ifom yesigunyaziso sohambo apha kwaye ubonise ubungqina bovavanyo olubi lwe-PCR kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kohambo oluya kwindawo oya kuyo.